Disclaable nri ehihie Clamshell kwesịrị ịdị na-enwe gburugburu ebe obibi enyi | ZHONGSHENG
Ọ bụ ezie na iji ikike mgbochi rọba emeela afọ iri, na ọtụtụ mba na ndị mmadụ chọrọ ịme ka gburugburu ikuku ghara imetọ ya, mana anyị ka nwere ike ịchọpụta na enwere ngwaahịa plastik ndị a na-ewefu. A katọrọ ihe na-adịghị mma nke ihe ndị dị na tebụl plastik diski a na-ebufu, ha na-esiri ike imebi ọ bụghị enyi na gburugburu ebe obibi. A na-enyocha ihe ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi nke nwere ike dochie rọba iji mee ngwugwu nri a na-ebufu.
Ka ọ dị ugbu a, igbe nri akwụkwọ nri maka nchekwa nke gburugburu ebe obibi bụ nke mbụ a ga-eji dochie igbe nri diski diski diski na gburugburu nchekwa. -ewete ụkpụrụ ahụike na nchekwa yana ụkpụrụ nchekwa gburugburu, yana na-enweghị ihe agbakwunyere agbakwunyere, ọ bụghị naanị na-adị nchebe na ahụike karị, kamakwa ọ ga-emebi emebi ma nwekwuo gburugburu ebe obibi. Ma ihe ndị dị mkpa eji esi nri igbe akwụkwọ bụ disip, nke a na - esite n’osisi. Site na mmụba nke osisi na-abawanye na ọnụ ahịa osisi, a na-enwekarị ihe ijuanya-igbe igbe nri gburugburu ebe obibi na-ejibeghị ya.